Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka hadlay weerarada ay mintidiinta gaysanayan bishan Soon qaad |
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka hadlay weerarada ay mintidiinta gaysanayan bishan Soon qaad
Gudoomiyaha Hay’adda Culimada Somaliyeed, Sheekh Bashiir Axmed Salaad, ayaa ka hadlay weerarada ay gaysanayaan kuwa mayalka adag, xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadan.
Gudoomiyaha, ayaa sheegay fekerka ay qabaan mintidiintu inaanu hadda soo bilaaban, isagoo intaa ku daray in Nabigu Caleehi Salaatu Wasalaam uu ku tilmaamay kuwo aad iyo aad u nasiib daran.
“Nimankan fekerkaas qaba, fekerkani, feker hadda bilowday maaha. Fekerkan waa fekerkii Khawaariijta la oran jiray weeye. Nebiga (NNKH) horey ayuu uga hadlay, tilmaamaha uu ku sheegay waxaa ka mid ahaa, inay yihiin dad aad iyo aad u nasiib xun, u nasiib daran, oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamayaan.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Hay’adda Culimada Somaliyeed.
“Fahamkii Diinta, akhlaaqdii Diinta iyo axkaamtii Diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ugu shaqaynayaan. Marka wixii xormada lahaa, dadkii xormada lahaa iyo mararka qaarkood makaamkii xormada lahaa, oo qofka uu ku Janno taggi lahaa, ayay ayagu inay ku kacaan waxyaalo khaldan ay ku naar taggayaan.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA.
Mar la weydiiyay waxa argagaxisadu ay qiil kaga dhigto in weeraro la qaado bisha Ramadan, ayuu yiri “Dadkan Diinta ku qaloocatay, tusaale ahaan wixii wanaagsanaa oo la samayn lahaa, oo fadliga lahaa, qofka inuu cabaado wanaagsan samaysto bisha Ramadan way fiican tahay, laakiin cibaadadii fiicneyd in dadka la laayo, ayaa looga dhigay soo arki maysid. Marka waxaan cibaado ahayn ayay cibaado ka dhigteen. Waqtigii munaasabadka cabaadada u ahaa bay samaynayaan. Waxay sameeyen cibaado maaha.”
Sheekh Bashiir Axmed Salaad, ayaa tilmaamay inay ku hadlayaan hadal wanaagsan, hadana ay samaynayaan ficilo xun xun, wuxuuna carab dhabay inay si khaldan u fahmeen Diinta Alle, isla-markaana ay la wanaagsan tahay ficilada foosha xun, ay ku kacayaan.
“Waxaan cibaado ahayn bay cibaado moodeen, waxaan sax ahayn bay sax moodeen, waxaan jihaad ahayn bay jihaad moodeen, marka waxaasoo dhan baa ka khaldan. Diintii oo si cagsi ah u gashay baa ka soo baxaysa nimankan.” Ayuu yiri Sheekh Bashiir.
Sheekha, ayaa sheegay in dhibaatadan looga bixi karo, iyadoo Ummada Muslimiinta ay si sax ah ugu dhaqmaan Shareecada Alle. Dadka oo ka gaabiyay ku dhaqanka Shareecada, ayaa waxay keentay inay soo baxaan niman sheeganaaya sida uu yiri inay iyagu buuxinayaan kaalintaasi. Brand Viagra buy online, lioresal reviews.